Otu otu Telegram si arụ ọrụ yana otu esi eme otu | Nzukọ mkpanaka
Taa, anyị nwere ngwa ozi ngwa ngwa dị mma iji nwee ike na -ekwurịta okwu oge niile na -enweghị nsogbu ọ bụla. Otu n'ime ha na nke kacha dịrị nchebe bụ Telegram. Na Telegram anyị ga -ahụ nhọrọ dị iche iche iji kparịta ụka, otu n'ime ha bụ otu. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmara otu Telegram si arụ ọrụ yana otu esi eme otu ewepụla na ihuenyo n'oge oge edemede a, n'ihi na ị ga -ama ka esi eme ya n'ime nkeji ole na ole. Ọ dị mfe ma ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ na ngwa ahụ ọ ga -adịrị gị mma.
Ọ bụrụ na anyị agwa gị na ọ ga -adịrị gị mma, ọ bụ n'ihi na kpọmkwem na ngwa a ebe nzuzo dị, enwere ọtụtụ otu na ọwa na -atọ ụtọ isonye. Enwekwara ọwa mana nke ahụ bụ isiokwu ọzọ anyị ga -emetụ aka ma ọ bụrụ na ị hụ otu, ka ị mara ihe dị iche. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ngwa izi ozi gị bụ Telegram na ịchọrọ ịmepụta otu ihe ọ bụla yana onye ọ bụla ị chọrọ, ị ga -amụta ya na paragraf ndị a. Maka nke ahụ na enweghị mkpamkpa ọzọ, anyị ga -aga ebe ahụ nkuzi na otu Telegram.
Ọdịiche dị n'etiti otu na ọwa Telegram
Dịka anyị kwuru, ọ bụrụ na ị banye n'ụdị "otu" abụọ a dị na Telegram, anyị ga -akọwa ihe ọ gbasara. Ọ ga -adị nkenke ebe ọ bụ na ọ bụghị ebumnobi nke edemede a mana ọ ga -etinye uche gị ka ị mara ihe ị nwere ike ịmepụta, gụọ ma jiri na ngwa ozi ngwa ngwa, Telegram.
Ndị ọrụ niile nwere ike imepụta otu dị iche iche, bido. Na onye ọ bụla so na otu Telegram nwere ike ịza ajụjụ ma tinye ọdịnaya ọ bụla. Ọ ga -enweta ndị otu ya niile ma onye ọ bụla ga -enwe ike ịgụ ihe ebipụtara ma ọ bụrụ na o sitere n'aka ndị ọrụ n'ime. Mana ọ bụrụ na anyị gaa na ọwa enwere nnukwu ọdịiche nke anyị ga -akọwa ma emechaa.
N'ime otu Telegram ị ga -enwe ike ịkpọ ndị otu ka ha sonye, ​​ya bụ, ọ bụrụ na ị mepụta otu ezinụlọ, ha ga -enwe ike ịga n'ihu na -esonyere ndị otu ezinụlọ. Ọ bụghị iwu na ị ga-enwe nwanne nne nna gị na listi ịkpọtụrụ gị, onye ị na-ahụbeghị kemgbe afọ 15.Mgbe ị nwere nick ya, ị ga -enwe ike ịkpọ ya. Otu ndị otu a ga -enwe ike ịgbanwe aha, onyonyo na njirimara ndị ọzọ nke otu ahụ iji hazie ya. Nke a bụ ihe dịka ọmụmaatụ na WhatsApp bụ naanị onye nchịkwa otu.
Ọ bụrụ na anyị gaa na ọwa, dịka anyị tụrụ anya na ha dị nnọọ iche. Nke ahụ bụ ikwu, ọwa bụ ebe ị ga -achọta ozi, n'ozuzu ya na isiokwu Mana ị gaghị enwe ike ịza ajụjụ ọ gwụla ma ị bụ onye nlekọta ọwa. A na -ejikarị ha eme ihe dị ka ọwa ozi, dịka ọmụmaatụ: egwuregwu egwuregwu vidiyo, onyinye teknụzụ, akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọrụ na ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ nwere ike dabara nke ọma dịka ọwa.
Ya mere, nnukwu ihe dị iche bụ na eN'ime otu Telegram ị ga -enwe ike ikwu ma ị bụ onye nchịkwa ma hazie ihe niile yana na ọwa Telegram naanị ndị nchịkwa na -ebipụta ọdịnaya. Ị na -amachi onwe gị imeghachi omume na ọdịnaya ma ọ bụ mgbe ụfọdụ, enwere ike mepee ndepụta nzaghachi na ọdịnaya ahụ wee kwuo okwu na ndị ọrụ ndị ọzọ dịka nzaghachi ọdịnaya nke onye nchịkwa ahụ. E nwere obere ihe ọzọ ị ga -eme. Ọ bụghị ya mere ọwa na -akwụsị ịbụ ihe na -atọ ụtọ, n'ezie ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma na ngwa Telegram. Mana anyị nwere mmasị ịmara otu esi emepụta otu na nke ahụ bụ ihe anyị na -aga ugbu a.
Otu esi emepụta otu Telegram
Ka anyị gaa n'ihe masịrị gị, mepụta otu Telegram ahụ ka ọ dị ugbu a. Yabụ, soro usoro ndị a anyị ga -enye gị n'okpuru ma ị ga -enweta ya n'ụzọ dị mfe:
para mepụta otu Telegram ihe ị ga -ebu ụzọ mee bụ imepe ngwa (o doro anya). Ugbu a, ị ga -anọrịrị na nnukwu ihuenyo wee pịa akara pensụl na -acha anụnụ anụnụ nke ị ga -ahụ na ala, n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ. N'ụzọ bụ isi, ọ bụ akara ngosi ị ga -pịa kedu mgbe ichoro ikwu okwu ya na onye si Telegram. Ugbu a ọ ga -eziga gị na ihuenyo - menu ebe ị ga -ahụ nhọrọ dị iche iche, mana ọ bụrụ n'ile anya na ala, kọntaktị ekwentị gị ga -apụta.
Ọ bụ ebe ahụ ka ị ga -pịa nhọrọ nke 'Otu ọhụrụ0 ma ị ga -amalite usoro ihuenyo niile iji mepụta otu Telegram ọhụrụ. Ugbu a, ị ga -agbakwunye ndị ọrụ niile ịchọrọ ịnọ na otu ahụ otu otu. Ọzọkwa n'elu ihuenyo ekwentị gị ị ga -ahụ kọntaktị. Ugbu a amatala mỌ bụrụ na ịmechara ịgbakwunye kọntaktị ndị a niile, ị ga -pịa 'V' ma ọ bụ lelee na ị ga -enwe n'elu aka nri iji kpọga gị na ihuenyo nhazi ọzọ.
Ọ fọrọ nke nta ka anyị gwụchaa, ugbu a, anyị ga -ahazi otu a ma maka nke a ị ga -pịa akara ngosi igwefoto ka ịhọrọ foto ịchọrọ ịnọ dị ka avatar otu. Ị nwere ike pịa aha otu iji dee aha otu ị bu n'uche, gbaa mbọ hụ na ọ bụ ihe mbụ na anya, ndị otu ndị ọzọ ga-amasị ya. Mgbe ịmechara ihe a niile ma ị mechaa nhazi ahụ, ị ​​ga -enwe ike gosipụta ọzọ na V ma ọ bụ lelee a ga -ekepụta otu Telegram wee bido. A ga -atụkwasị kọntaktị niile n'otu oge, a ga -amara ha ọkwa na ha nọ na otu ọhụrụ na ngwa. Ha nwere ike dee, gụọ ma zipu ihe ọ bụla ha chọrọ.
Ọ dịghị mkpa ka ị jikwaa ndị otu niile, ị nwere ike ịmepụta ndị nchịkwa ndị ọzọ, ya bụ, họrọ ndị ahụ ị chọrọ inwe ike ịkpọ ndị kọntaktị ha karịa ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ naghị adị gị ka akpachapụ anya na ya, ị nwere ike ịrịọ maka aha otutu ma kpọọ ha niile n'onwe gị.
Anyị nwere olile anya na akụkọ a baara gị uru na site ugbu a gaa n'ihu mara ka isonyere otu Telegram yanakwa ọdịiche dị n'etiti ha na ọwa. Ị nwere ike ịhapụ ajụjụ ọ bụla na igbe nkọwa. Hụ gị na edemede Mobile Forum na -esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » telegram » Otu otu Telegram si arụ ọrụ yana otu esi eme otu